March 2018 – ရွှေလရောင်
slyadmin March 31, 2018
ဦးစိုင်းရယ် ရွေးတတ်လိုက်တာနော် လတ်တလောလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့ အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဟာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုများစွာကို ရရှိနေပါတယ်။ သူမကတော့ တေးသံရှင်စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ သင်္ဂါရသီချင်းတစ်ပုဒ် လို့အမည်ရတဲ့ သီချင်းလေးရဲ့ Music Video လေးထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ပိုးမမှီသာ လို့အမည်တွင်သော မိန်းမလှလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို Music Video လေးထဲက သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေ…
မျက်မမြင် အကြားအမြင် ဆရာမကြီးရဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ် နဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ဟောစာတမ်း ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ရပ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ 9/11 အဖြစ်ဆိုးနဲ့ IS တို့ ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေမှုအပါအဝင် သွေး ထွက်အောင် မှန်ခဲ့တဲ့ ဟောကိန်းတွေကို ဟောခဲ့တဲ့ ဘူဂေးရီးယား အကြားအမြင်ဆရာမကြီး Baba Vanga…
ရပ်ထားတဲ့ကား/ဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက်ခံရသော်လည်း အလျှော်မရတဲ့အပြင် အရေးယူခံရတာ ဘာလို့လဲ?
ရပ်ထားတဲ့ကား/ဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက်ခံရသော်လည်း အလျှော်မရတဲ့အပြင် အရေးယူခံရတာ ဘာလို့လဲ? “ဟိုရှေ့က ရပ်ထားတဲ့ကား/ဆိုင်ကယ်ကို ဝင်တိုက်ပစ်ကွာ ပီးမှ အလျှော်ကိုတောင်းပစ်မယ်”တဲ့ တချို့ပြောသံလေးတွေ ကြားဖူးမှာပါ။ အကြာင်းအရာတစ်ခုခု၏ တဒင်္ဂဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကြောင့် လွှတ်ကနဲ့ပြောလိုက်ကြပေမဲ့ တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့ ဝင်မတိုက်ပါဘူး တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်ကိုရှောင်လို့ တိမ်းတာမလွတ်လို့ စတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့် နောက်ကနေတိုက်မိတာတော့ရှိမှာပေါ့။ အဲ့ဒီလိုများ ကိုယ့်ရဲ့ရပ်ထားတဲ့ယာဉ်ကို…
ဦးဝင်းမြင့် တွင် ကိုယ်ပို င် အိမ်နှင့်မြေ မရှိ၍ ပိုင်ဆိုင် မှု့ စာရင်းတင်သွင်း ရချိန် တွင် ပိုင် ဆိုင်မှု့မပြနိုင်ေ သာမြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပ ထမ ဆုံး သမ္မတဖြစ်လာ
ဦးဝင်းမြင့် တွင် ကိုယ်ပို င် အိမ်နှင့်မြေ မရှိ၍ ပိုင်ဆိုင် မှု့ စာရင်းတင်သွင်း ရချိန် တွင် ပိုင် ဆိုင်မှု့မပြနိုင်ေ သာမြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပ ထမ ဆုံး သမ္မတဖြစ်လာ သမ္မတသစ်ဖြစ်လာမည့်ဦးဝင်းမြင့်တွင်ကိုယ်ပိုင်အိမ်နှင့်မြေမရှိ၍သမ္မတဖြစ်လာသည့်အခါ ပိုင်ဆိုင်မှု့စာရင်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှု့မပြနိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်လာမည်။ဦးဝင်းမြင့်သည်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပြီး တာမွေမြို့နယ် ခြောက်လွှာတိုက်ခန်း တစ်ခန်းတွင်ဇနီး/သမီးဖြစ်သူနှင့်အတူမိသားစုသုံးဦးနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။၂၀၁၂ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အရွေးခံရသောအခါ နေပြည်တော်စည်ပင်ရိပ်သာတွင်တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ခဲ့ပြီး…
နောက်ဆုံးခရီးသည် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားကြီးတစ်စင်းသည် လူအပြည့်တင်ဆောင်ပြီး ခရီးတစ်ခုကို ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ လမ်းခရီးတွင် ရာသီဥတုက ချက်ချင်းပြောင်းသွားသည်။ မိုးတွေမည်းလာပြီး မိုးကြိုးတွေ ပစ်ချသည်။ မိုးကြိုးတွေက ကြောက်မက်ဖွယ် ပစ်နေသည်။ ကားအနီးဝန်းကျင်တွင် လင်းခနဲ လက်ခနဲ ဖြစ်သွားသဖြင့် ကြောက်လန့်ကာ တစ်ကားလုံး ဟစ်အော်ကုန်ကြသည်။ ကားမောင်းသူက ကားကို ရုတ်တရက်…
ငှက်ပျောသီးစားပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကြမယ်
ငှက်ပျောသီးစားပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကြမယ် ငှက်ပျောသီးမှာ သကြားဓါတ် ၃ မျိုးနဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေ အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ ခန္တာကိုယ် အားအင်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင် ဆေးဝါးတွေထက်ကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ၁။ စိတ်ဖိစီးမှု ဒီကနေ့ခောတ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုက ခောတ်သစ် ရောဂါတစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု များတာကြောင့်…
ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးတွင် လေဆာဖြင့်မျက်စိပါဝါ အခမဲ့ဖျောက်ပေးနေ
ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးတွင် လေဆာဖြင့်မျက်စိပါဝါ အခမဲ့ဖျောက်ပေးနေ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်၇န် ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးတွင် လေဆာဖြင့် မျက်စိပါဝါဖျောက်ပေးခြင်းကို အပတ်စဉ်သောကြာနေ့တိုင်း အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး အသက် ၂၀ နှစ် ပြည့်ပြီး သူတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးတွင် မျက်စိပါဝါဖျောက်ခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာအစားထိုးကုသခြင်းနှင့် အခြားသော မျက်စိရောဂါများစမ်းသပ်ကုသပေးခြင်းကို ခေတ်မီစက်ကိရိယာများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အခမဲ့…
သနားစရာကောင်းလှသောဇော်လင်းထွက်ဆိုချက်ဖတ်ပြီး မျက်ရည်မကျပါနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရယ်
သနားစရာကောင်းလှသောဇော်လင်းထွက်ဆိုချက်ဖတ်ပြီး မျက်ရည်မကျပါနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရယ် သနားစရာကောင်းလှသောဇော်လင်းထွက်ဆိုချက်ဖတ်ပြီး မျက်ရည်မကျပါနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရယ် ဇော်လင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ရေးပါမယ် ကျွန်တော်ကို စစ်ဆေးပြီးရိုက်တာ နားရင်း လေးငါးချက်လောက် ဆက်တိုက်ရိုက်တယ် ဝန်ခံခိုင်းတယ် သတ်လားမသတ်လားမေးတယ် မသတ်ဘူးပြောရင် ရင်ဘတ်ကို အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးတယ် ကန်တယ် ခေါင်းကိုအသက်ရှုမရအောင် အိတ်မဲတလုံးစွပ်တယ် အသက်ရှုကြပ်လာလို့ အိတ်ကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖောက်တယ် လေပေါက်ကလေးဖြစ်သွားတော့…
မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဇေယံ
မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဇေယံ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံတွေ အတော်လေး ရေပန်းစားနေပါတယ်။ fb အသုံးပြု သူတွေ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီး fb user တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတာပါ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ လုံးဝ Handsome ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ .. ဇေယံပါ။…
သင်္ကြန်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မည့် အလုပ်သမားများ သိရှိစေရန်
သင်္ကြန်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မည့် အလုပ်သမားများ သိရှိစေရန် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနက် မကြာမီကာလအတွင်း ကျရောက်မည့် မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်ဒေသအသီးသီးသို့ ပြန်ကြမည့် အလုပ်သမားများအဆင်ပြေ စေရန်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု အရ ဖြေလျော့သည့်အနေဖြင့်…